Enyemaka ndị ụwa na-atụ n'ọnụ
Ụlọ ndị ụwa na-atụ n'ọnụ n'ala anyị bụ naịjiria karịrị akarị. Na-agbanyeghị na mkpa ha dị ntakịrị, o nweghị onye na elenyere ha anya ma ọ bụ jụọ ma ha hụkwara nri rie. Gọmenti na ndị obodo leghaara ndị a ụwa na-atụ n'ọnụ anya, chezọọ na ha chọrọ enyemaka ka ha wee hapụ ịnọ n'okporo ụzọ na-arịọ ego ha ga-eji rie ọ bụrụgodị otu ugboro nri n'ụbọchị.
Dịka nzukọ enyemaka na ndị nwere afọọma pụrụ iche, ka ndị Igbo Community union S/W Germany e.V jiri horo ntutu taa na ha agaghị ahapụ ndị a ka agụụ gbuo ha. Anyị weere inyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka dịka otu ọkpụrụkpụ atụmatụ anyị ga na-akwado kwa afọ ọ bụla.
Nke a mere ndị nzukọ anyị ji ezigara ndị a ụwa na-atụ n'ọnụ ozi kwa afọ iji ti ha aka n'ọbi, ma gosịkwa ha na o nwekwara ndị ma na ha nọ ajọ ọnọdụ. Ndị Igbo na-ekwu na ọ bụ ka aka ha nwanyị ka ọ na-atụkwasị di ya, ọ bụ ncheta kachasị. Anyị na-aga na steeti Igbo nile n'otu n'otu, ịmaatụ, anyị agaala, gakwaa ebe dịka Oji, Onitsha, Asaba, Orlu, Okija, Okwelle, Ozoakoli, Umuahia dgz. ịhụ na ha soro rite uru n'aka anyị.
Ime ka atụmatụ a na-aga n'ihu, anyị na-anara nkwado ọ bụla ruru anyị aka site na okwu ọnụ wee ruo n'ego. Onye ọ bụla nwere mmasị inyere ụmụ ogbenye aka nwekwara ike ịkwado anyị. Ebumnuche anyị bụ ka akwụ soro ibe ya na-agba mmanụ. Kwalite anyị ka atụmatụ a bụrụ ihe ga-enwe isi maka na ọ bụ mmiri na-enyere akwụ aka ọ wee gbaa mmanụ.
Soro kwado anyị, ka ndị ụwa na-atụ n'ọnụ nọ n'ala Igbo wee soro na-aracha mmanụ nkwụ!